पाटन अर्थात ‘डजन्ट स्लीप सीटी’
Sunday, November 17, 2019 |आइतवार, मंसिर १, २०७६
जनतापाटी डेस्क बिहिवार, जेठ ९, २०७६, १०:१५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि आफूले गरेको कामको समीक्षा गर्दै ललिपतुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफू सन्तुष्ट भएको बताएका छन् । निर्वाचन पूर्व गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा रहेको उनी बताउँछन् । स्थानीय तहको नीति नियम बनाउने विषयमा नै बढी समय खर्चिनु परेको उनको बुझाई छ ।
उनी पाटनलाई विश्वका विकसित मुलुकको सांस्कृतिक सहरभन्दा उत्कृष्ठ सहर बनाउने अभियानमा उनी जुटेका छन् । उनले ललितपुरका सबै जनतालाई फाइदा पुग्ने गरी पाटन सहरलाई कहिल्यै नसुत्ने सहरको रुपमा विकासित हुने बताए । प्रस्तुत छ, उनै महर्जनसँग जनतापाटी डटकम टीमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । अब कसरी अगाडी बढ्ने सोच्नुमा हुनुहुन्छ ?
हामी निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । शुरुको वर्ष केही काम गर्न नसकेपनि पछिल्लो वर्ष भने केही उदाहरणीय काम गरेका छौं । हामीले जनतालाई धेरै काम गर्ने प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेका थियौं । सोही अनुसार महानगरले गर्नु पर्ने विषयहरुलाई दूई भागमा वर्गिकरण गरेर काम गरिरहेका छौँ । पहिलो तत्काल गर्न सकिने विषयमा तत्कालै काम गर्दै लैजाने । जस्तो हामीले वृद्धभत्ता घर–घरमा पुर्‍याउने काम शुरु गरिसेका छौँ ।
दोस्रो सफा र सुन्दर महानगर बनाउने विषयमा सकृय भएर लागेका छौं । यस अन्तरर्गत हामीले फोहोर कलेक्सनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । अलि लामो समय लाग्ने योजनाको रुपमा हामीले पुल्चोकदेखि थापाथलीसम्मको सडकमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन अध्ययन गरिरहेका छौं । मनो रेलको विषयमा काठमाडौं महानगरसंगको सहकार्यमा काम अघि बढाएको छौैं ।
स्वच्छ सफा ललितपुर महानगर बनाउने तपाईको योजना कहाँ पुग्यो ?
निश्चित रुपमा हामीले ललितपुर महानगरलाई स्वच्छ सफा सुन्दर महानगर बनाउने विषयमा काम शुरु गरिसकेका छौं । जसका लागि हामीले स्थानीय तहले पाएको अधिकार र प्रदेश एवं संघ सँगका साझा अधिकारको विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसले स्वच्छ सफा सुन्दर महानगर बनाउने कार्यमा समस्या आएको छ । यसमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने सोचमा हामी छौं ।
पहिलो कुरा फोहोर फाल्ने विषयमा हामी आत्मनिर्भर छैनौं । फोहार व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको ओखरपौवालाई प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको विकल्पको खोजी हामीले गर्नुपर्ने छ । अहिले संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरु बनेका छन् । अब हामीलाई तिब्र रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । यसतर्फ हामी सकृय हुनेछौं ।
तपाईको कल्पनाको समृद्ध महानगर कस्तो बन्नेछ ?
समृद्ध र सर्वसम्पन्न महानगर बनाउने मेरो कल्पनाको महानगर हो । जस्तोः १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र शिक्षाको गुणस्तरमा विशेष जोड दिन्छौ । प्री क्लासलाई पनि निःशुल्क बनाउने अभियान शुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै काम गर्छौ । सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने रोगको विषयमा आम जनतामा जानकारी नै छैन । त्यसमासहजीकरण गर्दै सबैको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउनेछौं । सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रहरुको माध्यमबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरु विस्तार गरिनेछ । सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै हामी एक कदम अघि बढेर काम गर्नेछौं ।
उपत्यकामा वायु प्रदुषण बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
सडक विस्तार, खानेपानीको पाइप विस्तार र ढलको व्यवस्थापनका हिसावले सबैभन्दा बढी सडक खन्ने काम भैरहेको छ । यसरी खनिएका सडकमा धूलो उडाउन नपाउने गरी कामगर्ने सम्झौता भएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा निर्माण कम्पनीले ध्यान दिएको देखिदैन । त्यसको अनुगमन गरेर सम्झौता अनुरुप काम गर्न महागरले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । स्थानीय जनतालाई असर नगर्ने गरी विकास निर्माणका कामगर्ने वातावरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले उल्लेख गरे अनुसार हामीकहाँ पनि प्रदुषणको मुख्य कारक सवारी साधन हो । त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणका विषयमा सरकारले केही कदम चालेको छ । सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधानहरु नै २० वर्षभन्दा पुरानो भएको पाइएको छ । सरकारले आफूले पहिला त्यस्ता गाडीहरुलाई हटाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि महानगरले सम्बन्धित निकायहरुसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ ।
प्रदुषण गर्ने सवारी साधनहरुले हरियो स्टिकरको लाइसेन्स पाइरहेका छन् । स्टिकर लगाएर कालो धुँवा फालिरहेको सवारीसाधन हामीले देखेपनि टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प देखिएको छैन । तर हामीले यसको अनुगमन गरेर तत्काल सडकमा परिक्षण गरी कार्वाही गर्ने काम शुरु गरेका छौं । महानगरले आफ्नो छुट्टै कानून बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि काम शुरु गरेको अवस्था छ ।
सार्वजनिक जग्गा र खुल्ला स्थानहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा के गरिरहनु भएको छ ?
गएको शक्तिशाली भूकम्पमा हामीले खुल्ला ठाउँको अभाव हुँदा सडकमा नै रात विताउनु परेको थियो । यो एउटा विडम्बना हो । वास्तवमै भन्ने हो भने महानगरभित्र धेरै खुल्ला स्थानहरु थियो । लगनखेलको आर्मी व्यारेक बनेपछि सर्वसाधरणले प्रवेश नै नपाउने भयो । कुमारी पाटीको ठूलो पोखरी अहिले खुम्चिएर अत्याधिक सानो भएको छ । यी कुराहरु भनेको हामीले हाम्रो भविष्यका सन्तानप्रति गरिएको शोषण हो । त्यसैले अब भएको सार्वजनिक जग्गा र खुल्ला स्थानहरुलाई अन्य कुनैपनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नदिने नीति लिइएको छौँ ।
यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाहरु के–के हुन् ?
ललितपुर महानगरपालिका भनेको पर्यटकीय सम्भावनाहरु यथेष्ठ बोकेको स्थान हो । यहाँ मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरु छन् । मूर्तसम्पदा भूकम्पले बिग्रीयो । त्यसको पूननिर्माण गरिएका छन् । केहीलाई अझ पूरा गर्ने विषयमा विशेष जोड दिएका छौं । पहिलेको अवस्थामा निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले त्यसका लागि केही समय लागेको हो ।
अमूर्त सम्पदाको रुपमा पाटनको पुरै क्षेत्र अमूर्त सम्पदाका खानी हो । त्यसअर्थमा हामीले यसलाई ‘ओपन म्यूजीयम’ पनि भनेका छौं । यसमा गाना बजाना, नाँचगानदेखि जात्रा पर्वहरुमा भोज भतेर तथा भेषभूसालाई संरक्षण गरेर राख्न आवश्यक छ । यो नै हाम्रो पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दछ । बागमती सभ्यताँंग जोडिएर हामीले ‘लाईभ म्यूजियम’को विकास गर्ने काम शुरु गरेका छौं । यसमा सबैको साथ सहयोगको अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
हरित शहर बनाउने योजना कहाँ पुग्यो ?
महानगरलाई हरित महानगरको रुपमा विकास गर्ने योजनामा हामी काम गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म विरुवा रोप्ने तर त्यसको संरक्षण नगर्ने प्रवृती हामी कहाँ छ । अहिले ६ फिटभन्दा कमको विरुवा रोप्न कामलाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छौं । जसले रोपिएका विरुवा हुर्काउन सहज भएको छ । महानगरले रोपेको विरुवा नहुर्केसम्म त्यसको रेखदेख गरी हरित सहरको रुपमा विकास गर्दैछौं । हरेक घरले दुई विरुवा रोप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
विरुवा रोप्ने मात्रै नभई त्यसलाई हुर्काएर ठूलो बनाउने जिम्मा पनि सोही व्यक्तिको हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नदीको छेउछाउँमा रुख रोपेर हरियाली कायम गरिनेछ । यस्तै गरी खुल्ला स्थानहरुमा पनि वृक्षारोपण गरेर हरियाली पार्कको रुपमा विकास गरिँदै छ ।
साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कस्तो भूमिका रहन्छ ?
राजनीतिक स्थायीत्वले आर्थिक वृद्धि बढी हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट रुपमा प्रमाणीत भैसकेको छ । ललितपुर महानगरभित्रका साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणले पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । खोकना, बुंगमती, हरिसिद्धि पाटन दरवार क्षेत्रलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकहरु आएपनि उनीहरुले बढीमा २ घण्टा विताउँछन् । उनीहरु फेरी फर्किएर काठमाडौंमा नै जाने गरेका छन् ।
हामीले पर्यटकलाई लामो समयसम्म राख्न सकेका छैनौ । उनीहरुको बस्ने अवधी बढाउन यहाँको सहरलाई ‘रात्री जीवन’को विकास गर्नुपर्दछ । पाटन दरवार क्षेत्रमा राती केही हेर्न सकिने अवस्था छैन । त्यस क्षेत्रमा दिउँसोभन्दा राती अझ रोमाञ्चक हुने गरी प्रकाशको व्यवस्था गर्ने योजना हामीले अघि सारेका छौं ।
यसले पाटन त दिउँसो भन्दा पनि राती रमाइलो हुन्छ भन्ने सन्देश दिनेछ । जसले गर्दा पर्यटकलाई लामो समय पाटनमा नै व्यस्त राख्न सकिन्छ । विश्वका पर्यटकीय सहरहरुमा दिउँसोभन्दा पनि रातीको समयमा उत्कृष्ठ देखिने बनाइएको हुन्छ ।
त्यसै गरी पर्यटकहरुले दिउँसोको सयममा भन्दा रातीको सयमा आउँदा बस्न योग्य बनाउन हामीले ‘होम स्टे, रात्रीकालिन जिवन, साँस्कृतिक जीवन्त सम्पदाको संरक्षण’को काम थालनी गरेका छौं । ‘लण्डन सिटी नेभर स्लीप अ डे’ भन्ने गरिएको छ । हामीले पनि यहाँ ‘पाटन सीटी डजन्ट स्लीप’ किन ? भन्ने गरी काम अघि बढाएका छौं । यस्ता विषयमा सबैले मिलेर सम्पदाको संरक्षण गर्ने हो । पर्यटकहरु आउँदा उनीहरुलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
कसरी पर्यटक आकर्षित हुन्छन् ?
पर्यटकहरुलाई पाटनमा आएपछि बस्नका लागि गुणस्तरीय बासस्थानका लागि होम स्टे बनाउन महानगरले सहयोग गरिरहेको छ । पर्यटकको आकर्षण बढाउँन आकर्षित रेष्टुरेण्टहरु सञ्चालनमा छन् । यस्तै पाटनको मंगलबजार क्षेत्रमा पनि साँस्कृतिक मूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्न शुरु गरिएको छ । पाटनमा केही नभएपनि २–३ दिन बस्ने वातवरण हामी बनाउँदै छौं ।
प्रविधिको विकास र प्रयोगमा कस्तो भूमिका हुन्छ ?
हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । पहिलो कुरा महानगरलाई प्रविधियुक्त महानगर बनाइने छ । महानगरले आफूले ‘पेपर लेस अफिस’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सबै निर्णयहरुलाई डिजिटलाईज गरिरहेका छौं । सबै वडामा जनताले इन्टरनेटको माध्यमबाट सेवा लिने र सेवा दिने कामको सुरुवात भएको छ ।
अनुशासन उलंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने तयारीमा काँग्रेस सोमवार, चैत्र २५, २०७५, ०९:४१:००
पार्टी दलाल पुँजीवादको पक्षमा रहेकाे नेता भुसालको आरोप 'यसो हेर्दाखेरी हामी सत्ताधारी हौँ, शक्ति चलाउनुपर्ने छ, सत्ता चलाउनुपर्नेछ, बजेट बनाउनुपर्नेछ, लागु गर्नुपर्नेछ, अनेक काममा व्यस्त छौँ । प्रतिपक्षले गर्छ भनेको, ऊ त अझै पराजयको पीडाले ब्युँझिएको पनि छैन । यसरी घाइते भएको छ कि, उठेको पनि छैन । मंगलवार, जेठ २१, २०७६, १६:२४:००
मेरा लागि राजनीति नयाँ होइन: विद्या भट्टराई
'नेपाल ल्याण्डलक्ड होइन ल्याण्डलिङ्कड देश बन्छ'